प्रधानमन्‍त्रीपछि वामदेव गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष प्रस्ताव – ramechhapkhabar.com
प्रधानमन्‍त्रीपछि वामदेव गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष प्रस्ताव
काठमाडौं, ५ पुस ।
स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सत्तारूढ नेकपाभित्र देखापरेको समस्याको निकासका लागि विभिन्‍न विकल्पमा छलफल हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पद सुरक्षित नरहने अवस्थामा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर पनि अहिलेको गतिरोधको निकास दिने विकल्पमाथि छलफल चलाउन थालेको नेकपाका नेताहरू बताउँछन् । यसका लागि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय बन्न थालेको गौतमनिकट केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीले जानकारी दिए ।
दोस्रो तहका नेतामार्फत गौतमलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न प्रस्ताव गरिएको र यसरी समस्याको समाधान ननिस्कनेमा उनी अडिग रहेको पराजुली बताउँछन् ।
“अध्यक्ष बनाउन केही साथी लाग्नुभएको छ । गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर अहिलेको समस्या समाधान गरौं भन्ने उहाँहरूको मत छ,” उनी भन्छन्, “पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई निकास दिनु राम्रो कुरा हो । तर, वामदेव गौतमलाई केपी ओलीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रस्तुत गरेर हुँदैन । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट पनि बनाउनुपर्‍यो ।”
अहिलेको मूल प्रतिद्वन्द्वी प्रचण्ड-माधवकै गठबन्धन रहेको निष्कर्ष सुनाउँदै ओलीले राखेको प्रस्तावमा उपाध्यक्ष गौतम जाँदा दाउपेचको लडाइँ मात्रै हुने उनको ठहर छ । यसले समाधान पनि नदिने उनको निचोड छ ।
“अन्तरविरोध, समस्या के कारणले उत्पन्न भएको हो ? तिनलाई कसरी समाधान गर्ने हो ? उपाय के हो ? भन्ने पत्ता नलगाइ सतहमा नै लिपपोत गर्ने ढङ्गको, दाउपेच गर्ने ढङ्गको गर्नुभयो भोलि अर्को मुद्दबाट समस्या ब्युँतन्छ,” उनी भन्छन् ।
त्यसैले अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने कुरामा नै गौतम अडिएको उनी बताउँछन् । त्यसका निम्ति सबै लाग्नुपर्ने, गौतम अध्यक्ष बनाउने नै हो भने देखिएका समस्या समाधान गर्ने विधिको खोजी गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
पराजुलीले यसमा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा पनि स्थायी कमिटीका केही युवा नेता सक्रिय रहेको जिकिर गर्छन् । उपाध्यक्ष गौतमलाई अध्यक्षमा अघि सार्दा प्रचण्ड-नेपाल समूहले अघि सारेको वैधानिक मान्यता एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी कार्यान्वयन हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।
“एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीको उपयुक्त पात्र वामदेव नै हो,” उनी भन्छन्, “माधव समूहलाई अघि सार्दा नवौं महाधिवेशनमा आफूसँग चुनाव हारेकाले ओली पक्षले स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । फेरि अहिलेको शक्ति सन्तुलनअनुसार नेता नेपालको पल्ला भारि पनि हुनसक्छ ।”
प्रधानमन्त्री भएको समूहले हार्नेगरी कुनै सम्झौतामा नजाने हुनाले गौतम सर्वग्राह्य हुनसक्ने उनको विश्वास पनि छ । यसरी अघि बढ्दा नेकपा पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहबाट प्रचण्ड र एमाले समूहबाट गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर महाधिवेशनसम्म जान सकिने उनी बताउँछन् ।
तर, पार्टी कमिटी र ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालकाबीचमा सहमति भएमात्रै नेता गौतमले स्वीकार गर्ने उनी बताउँछन् ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य बलराम बास्कोटा दुईजना अध्यक्षबीच हुने सहमतिले निर्धारण गर्ने बताउँछन् । उनले पनि अहिले उपाध्यक्ष गौतमलाई अध्यक्ष बनाएर समाधान ननिस्कने बताउँदै पार्टी एकतामै जोड दिनुपर्ने बताउँछन् ।
“वामदेवजी एकताकै पक्षमा लाग्नुभएको छ । पार्टी एकताका लागि दुवैजना अध्यक्षसँग उहाँको अनुरोध पनि छ,” उनी भन्छन् ।
शनिबार मध्याह्‍न खुमलटारमा भएको दुई अध्यक्षको छलफलमा उपाध्यक्ष गौतम पनि साक्षी थिए । उनले दुवै अध्यक्षले त्यागको भावनाले अघि बढ्नुपर्ने बताएको बास्कोटा बताउँछन् । “दुई अध्यक्षले पार्टी मिलाएर, विवाद समाधान गरेर लैजानुपर्छ भन्नेमै उहाँको जोड रह्यो । स्थायी कमिटीमा पेस भएका प्रस्ताव दुवै पक्षलाई पाच्य भएको छैन । दुवै अध्यक्षमा त्यागको भावना हुनुपर्‍यो ।”